Dib u eegista Blu-ray: jeedal iyo jirka
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Dib u eegista Blu-ray: jeedal iyo jirka
Karbaashka iyo Jidhku waa qayb xiiso leh oo ku jirta buugga ballaadhan ee filim sameeyaha reer Talyaani Mario Bava. Xagga sheekada, way ka fogtahay shaqadiisa ugu fiican. Waa tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u maamuli kara mid fudud oo wareersan. Qurux ahaan, si kastaba ha noqotee, dadaalkii 1963 wuxuu ka mid yahay waxqabadyadii ugu waaweynaa ee Bava - taasina waxay wax badan u sheegeysaa agaasime si weyn loogu amaanay muuqaalkiisa muuqaalka ah ee u gaarka ah.
Qoraalka, oo ay qoreen Ernesto Gastaldi (Torso), Ugo Guerra iyo Luciano Martino, ayaa loogu talagalay inay noqoto jawaabta Talyaanigu siiyo la qabsiga Roger Corman ee 'Edgar Allan Poe' - oo inta badan waa lagu guuleystay. Wax yar ka dib markuu ka soo laabtay masaafurintii oo uu ku noqday qalcaddiisa qoyskiisa, ayaa waxaa la dilay nin sharaf leh oo lagu magacaabo Kurt Menliff (Christopher Lee). Laakiin ciqaabta qoyskiisa way ka fog tahay dhammaad, maaddaama ay dhacdo murugo-qarsoodi ah oo naxdin leh. Dhagaystayaasha ayaa loo daayay inay su'aal ka weydiyaan in cirfiidka Kurt uu ku soo dhacayo mandiqadda ama haddii mid ka mid ah dadka deggan uu mas'uul ka yahay dilka aargudashada.
Karbaashka iyo Jidhku wuxuu dhacayaa qarnigii 19aad, sidaa darteed wuxuu hodan ku yahay jawiga Gothic, oo aan ka duwanayn markii ugu horraysay ee agaasime Bava, Black Sunday. Laakiin waxaa lagu toogtay midab sharaf leh, oo xoogga saaraya buluugyada firfircoon iyo kuwa buluugga ah ee leh lahjadaha casaanka. Waxaa la sii daayay isla sanadkaas sida Sabtida Madow ee la midka ah, Whip iyo Jidhku waxay gacan ka geysteen aasaaska aasaaska mustaqbalka Bava. Sawirqaade Filim sameeye Ubaldo Terzano (Deep Red) hubaal wuxuu qeyb ka qaatay qaabka muuqaalka, laakiin Bava, shaki kuma jiro, wuxuu lahaa talooyin badan.
Muuqaallada ka sokow, Karbaashka iyo Jidhku sidoo kale waa lagu ammaani karaa iskudhafkooda. Christopher Lee (The Wicker Man) wuxuu helaa amaah madaxeed doorkiisa muhiimka ah. Dadka filimka jecel ee Talyaanigu waxay aqoonsan doonaan dhowr xubnood oo kale iyo Bava joogto ah, oo ay ku jiraan Harriet Medin (Dhiigga iyo Madowga), Luciano Pigozzi (Dhiigga iyo Madowga), Gustavo De Nardo (Sabtida Madow) iyo Tony Kendall (Soo noqoshada dadka sharka leh).
Karbaashka iyo Jidhku waa kudarsigii ugu dambeeyay ee Kino Classic's Bava ururinta, oo leh sii daayo Blu-ray ah oo runtii u keenaya muuqaalada hodanka ah nolosha. Sawirka qeexitaanka-sare wuxuu si mug leh uga mugdi badan yahay DVD-dii hore ee la sii daayay, laakiin, marka la eego diiwaanka Kino, waxaan u janjeedhayaa inaan aaminsanahay in wareejinta hoosku ay tahay matalaad filim ka saxan. Ka sokow isjiidka, muuqaalka kelida ah ee gaarka ah waa faallo maqal ah oo horay loo duubay oo uu sameeyay Video Watchdog's Tim Lucas. Jidka buuxa ee macluumaadka, sida had iyo jeer, laakiin sidoo kale waa hilaac taariikh leh (ie Lucas wuxuu xusayaa doorka "soo socda" ee Lee ee Star Wars: Qeybta II).
Sida soosaaridii Talyaaniga ee xilliyadii hore, filimka waxaa lagu duubay jilaayaasha oo ku hadlaya afkooda hooyo kadibna loo bixiyay. Cajaladda waxaa ku jira nooca Talyaani ah (oo wata cinwaanno u dhigma) oo ay weheliso dubbiraha Ingiriisiga (oo muujinaya qof sameynaya sida ugu fiican ee uu u arko Christopher Lee - maahan ninka laftiisa). Codka dib loo habeeyay ayaa dhawaqaya, oo ay ku jiraan Carlo Rustichelli's (Dila Ilmaha, Dila) dhibcaha xusuusta leh.
Taageerayaashu waxay ka doodayaan Karbaashka iyo Jirka uu ka kooban yahay Bava filmography caan ah, laakiin muuqaalkiisa filimka xiisaha leh waa mid aan la inkiri karin. In kasta oo aysan noqon karin hordhaca ugu fiican ee shaqadiisa, The Whip iyo Body waa in loo baahan yahay daawashada wixii agaasimayaal mustaqbalka ee sawir qaadista ah. Toogashada wanaagsan ee gacantiisa jilicsan ee Lee, oo lagu maydhay buluug, si tartiib tartiib ah uga soo gaadhay hooska dhinaca kamaradda waa mid ka mid ah waxyaalaha cajiibka badan ee cajiibka ah.
Blu rayMario BavaKarbaashka iyo Jirka
Dib u eegid: "Halkan waxaa imanaya Ibliis"
13 Qeybaha Farshaxanka ee Argagaxa ee Crazy 4 Cult 7